Natiijooyinka Tijaabada-Wax-qabadka ee Hubspot | Martech Zone
Natiijooyinka Tijaabada-Wax-qabadka ee leh Hubspot
Had iyo jeer waa wax la yaab leh in la arko sida khilaafaadka khiyaanada leh ee wicitaanka ficilku ay saameyn aad u ballaaran ugu yeelan karaan heerarka gujinaya-illaa iyo is-beddelka Mid ka mid ah meelaha Hubspot taas uma maleynayo in dad badan oo si buuxda uga faa'iideysanaya ay yihiin qeybtooda-Wax-qabad.
Waxaad ku ogaan doontaa hal wicitaan ficil ah oo ku saabsan 'Martech' hoosta hoose ee sadarka bidix. Waxaan tijaabinay seddex nooc oo isku mid ah oo isugu wac-ficil. Farriinta ayaa isku mid ahayd, laakiin midabka waannu ku kala duwanaanay. Midkood wuxuu ahaa asal madow oo aad uga soo horjeedda bogga kan kalena wuxuu u dhawaa mid isku mid ah - oo kaliya kala beddelaya midabka badhanka.
Natiijooyinku waa kuwo xiiso leh - CTA oo leh badhanka cagaaran ayaa ka roon kuwa kale ee CTAs laba jeer! Nooca badhanka cagaaran wuxuu keenay qasabno yar, laakiin sicir beddelaad aad u sarreeya.
Kani waa tijaabo yar oo aan kaliya ku kala duwanaanay midabada… waan sii wadaynaa tayadoodii CTA oo leh noocyo kala duwan oo midabbo badan leh oo imtixaannada kala duwani ay dhab ahaan ugu habboon yihiin natiijooyinka. Waxaan sidoo kale garwaaqsan nahay xaqiiqda ah in qiimaha guud ee gujintu uu aad u hooseeyo, sidoo kale… waxaan haynaa shaqo aan ku qabanno whee oo aan soo bandhigno CTA-gaan. Waxay ku jirtaa meel adag oo aan had iyo jeer ku habboonayn waxyaabaha ku xeeran.
Hubspot wuxuu fududeynayaa tijaabada. Waad ku dari kartaa noocyo badan oo wicitaanka-ka-ficil-celinta ah dhexdooda ka dibna kaliya ku dheji qoraalka ay ku bixiyaan boggaaga. Hubspot sidoo kale waxay bixisaa habab lagu bartilmaameedsado booqdayaasha gaarka ah ee wicitaan-ka-fal… laakiin taasi waa qoraal kale!
Fiiro gaar ah: DK New Media waa shahaado Hubspot Wakaaladda.
Tags: imtixaanka abwac talaabowicitaanka tijaabadahubspotimtixaanka
Iska ilaali - Google Search Console wuu iska indhatirayaa Longtail-kaaga
Jan 15, 2013 at 10: 51 AM
Ma aanan ogeyn inaad tahay Doug Wakaaladda Hubspot! Waxaan u isticmaalnaa Hubspot hadda http://www.tynerpondfarm.com laakiin waxay ku fakarayeen inay beddelaan. Miyaynu dhawaan ka hadli karnaa? Ma helayno natiijooyinka aan dooneyno laakiin taas ayaa khaladkeenna leh….
Jan 15, 2013 saacadu markay ahayd 6:54 PM
Haa, waa hubaal inay yihiin. Waxaan ka hirgelinay Hubspot, Pardot, ActOn, Marketo iyo Eloqua macaamiisheenna @chrisbaggott: disqus :). Dabcan, shirkadaha Indiana ma oga taas maxaa yeelay waxay wakaalado ka kireystaan ​​gobollo kale, lol.